Vashanyi vari kutiza, asi haisi COVID-19 chete paGreek Island iyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Vashanyi vari kutiza, asi haisi COVID-19 chete paGreek Island iyi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Greece Kupwanya Nhau • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vashanyi pachiwi ichi cheGreek vakatya ndokuenda panharembozha yavo kuti vawane ruzivo uye kuti vaone zvakaitika. Kwapera chinguva, vakanhonga matauro nemaamburera kubva kumahombekombe ndokuenda kumakamuri avo, nepo avo vaive vakarara vakamuka kurira kwekutiza kwendege dzehondo ”mumiriri wevashanyi pachitsuwa ichi, Konstantinos Papoutsis, akatsanangurira bepa remuno.
Kwayedza Muvhuro masikati, masangano ekufambisa akazadzwa nevashanyi vane ruzha nevashanyi vaida tikiti rekudzoka rechikepe chekutanga kuRhodes. Nhare "dzakatyoka" mumasangano ekufamba echitsuwa chiri kure.
Icho chikonzero hachisi Coronavirus asi sekuchengetedza coronavirus, sevhisi sevhisi yakamiswa kubva munaKurume. Nhamba dzevashanyi muTurkey kazhinji kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu dzakadzika pasi pe74 muzana zvichienzaniswa nenguva imwechete mu2019. MuKas, vashanyi vanofungidzira mabhizinesi avo mumwedzi miviri yekupedzisira ari pakati pe60 ne90 muzana yemakore akajairwa.
Kune anonyatso kuoneka kubva kuKaş, Turkey kuyambuka bay inogara Kastellorizo, chitsuwa chidiki cheGreek chine vanhu mazana mashanu chete. Panzvimbo yayo yepedyo, ingori 500km (2 mamaira) kure nemahombekombe eTurkey. Kastellorizo ​​iri 1km (125 mamaira) kubva kuchitsuwa chikuru cheGreek cheRhod kumadokero, uye angangoita 78km (600 mamaira) kure nenyika yeGreek. Uye gakava gore rino rakatenderedza ndiani muridzi wemvura mhiri kwaro, zvakadzika muMediterranean.
Kas yakashandurwa kubva kuma1990: kutanga nekushanya uyezve nehukama hwakanaka naKastellorizo ​​yakauya nayo. Zvese zviri zviviri, kunyangwe, zvakatyisidzirwa gore rino: nedenda reCOVID-19 kune rimwe divi, uye kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kune rimwe divi.
Mumwedzi waNyamavhuvhu naSeptember, Turkey nevavakidzani vayo vanga vari mukukonana kuri kuwedzera pamusoro pemvura inopokana muEastern Mediterranean, uye kodzero yekuchera zviwanikwa zvine simba mazviri.
Kumhiri kwemahombekombe emahombekombe uye pamberi pemahotera emahombekombe emahombekombe, kune chikepe chechidiki cheTurkey muKas Marina. Kumisikidzwa pano pane mamwe mazuva uye kufamba-famba mumakungwa kune vamwe, chingori chiratidzo chimwe chete chenguva yechirimo isina kujairika pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kwenyika.
Uye nepo Kupro - uye nemvura yakaipoterera - ingave ndiyo yakareba-yakamira gakava iri, ndiKas, taundi diki rakaiswa pakati pemakomo neGungwa reMediterranean, rakabuda senzira yekukakavadzana kwazvino. "Nyika yose yakatarisa!" anodaro mumwe weko.
Kune zvinoratidzika nyore kubva kuKas mhiri kwegungwa kunogara Kastellorizo, chitsuwa chidiki cheGreek chine vanhu mazana mashanu chete. Panzvimbo yayo yepedyo, ingori 500km (2 mamaira) kure nemahombekombe eTurkey. Kastellorizo ​​iri 1km (125 mamaira) kubva kuchitsuwa chikuru cheGreek cheRhodes kumadokero, uye angangoita 78km (600 mamaira) kure nenyika yeGreek. Uye gakava gore rino rakatenderedza ndiani muridzi wemvura mhiri kwaro, zvakadzika muMediterranean.
Kubva pakati paAugust, yeTurkey seismic yekutsvagisa ngarava Oruc Reis - yakaperekedzwa nengarava dzehondo - yakapedza mwedzi ichiratidzira tarisiro yekugona kuchera mukati memvura inopokana, danho rakapihwa mhosva neGirisi neEuropean Union. Mukupindura, mafirati echiGreek akatumirwa kumumvuri weTurkey flotilla, zvichitungamira mukukonana kudiki pakati pezvikepe zveTurkey neGreek. Gurukota rinowona nezvekunze kuGerman Heiko Maas akayambira mativi ese ari "kutamba nemoto" uko "tumvura tese tudiki tungakonzera njodzi".
Asi muKas pachayo, vashoma vanoita kunge vane hanya nazvo. Erdal Hacivelioglu, nyanzvi yemagetsi yemuno uye anoverengera nhoroondo anotsigira zvirevo zveTurkey muMediterranean, anga achitumira mameseji kushamwari dzake paKastellorizo ​​panguva yese yekuratidzira, asingatombo taure nezve geopolitics zvachose. Achinwa cay pamberi pechitoro chake, anotsanangura hukama hurefu pakati pemataundi maviri.
Ivo vaviri vechokwadi vaimbove vavakidzani muhumwe humambo hweOttoman. Uye nepo Kas aigara achiwedzera chiTurkey uye Kastellorizo ​​achiwedzera chiGreek, mitsara pakati pevaviri yaive isinganyanye. Kas izere neyakanaka, bougainvillaea-yakarongedzwa dzimba dzeGreek. Pamberi pekuchinjana kwevanhu kuma1920s - uko 1.5 miriyoni vatauri vechiGreek muAnatolia vakatumirwa kuGirisi - yaive nevanhu vakawanda vechiGreek futi.
Zvese pano zvichange zvichitarisira kuti hakuna kumwe kukura.
Asi, vashoma muKas vanotenda kuti ichave yakakomba kupfuura iyo. “Zvematongerwo enyika chete. Ingori mitambo yevana, "anodaro Turhan, achiseka" Helikopta inouya. Ngarava yehondo inouya. Asi nei? Chikonzeroi chatinacho kuve vavengi navo? Takaita semhuri. ”